विश्वकप फुटबल : आज ब्राजिल र स्विटजरल्याण्ड भिड्दै, यस्तो छ खेल तालिका » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । विश्वकप फुटबल २०१८ को चौथो दिन आज तीन खेलमा ६ टोली भिड्दै छन्।
जसमा पहिलो खेल कोस्टारिका र सर्बियाबीच हुनेछ भने दोस्रो खेलमा जर्मनी र मेक्सिको भिड्दै छन्। त्यस्तै तेस्रो खेलमा ब्राजिल र स्विटजरल्याण्ड भिड्दै छन्। यी टिम मध्ये ब्राजिल यस्तो टोली हो, जसले सबै विश्वकप खेल्दै आएको छ।
ब्राजिलले ८० वर्षयता आफ्नो सुरुवात म्याच हारेको छैन्। त्यस्तै जर्मनी विश्वकपमा १९ पटक खेलेको छ । ब्राजिल ४८ वर्षमा ग्रुप स्टेज म्याचमा कहिलै पराजित भएको छैन्। ब्राजिल र स्विटजरल्याण्ड विश्वकपमा यो भन्दा अघि एक पटक आमनेसामने भएका छन्। १०५० मा भएको खेलमा २२ गोलको बराबरीमा खेलेका थिए।
ब्राजिल विश्वकपमा अहिले खेलिरहेका टोली मध्ये सबै भन्दा बढी ५ पटक च्याम्पियन बनेको छ। पछिल्लो १२ विश्वकपमा ग्रुप स्टेजमा ब्राजिल एक पटक पनि पराजित बनेको छैन्। ब्राजिलले आफ्ना १८ सुरुवात खेलमा १६ खेल जितेको छ।
सन् १९३४ मा स्पेनले ३-१ ले पराजित गरेको थियो। ब्राजिलले आफ्नो कोच टिटेको मार्गदर्शनमा पछिल्लो २१ खेलमा १ पटक मात्र पराजित भएको छ। त्यस्तै स्विटजरल्याडको कुरा गर्ने हो भने यो टोली १-१ औँ पटक विश्वकपमा सहभागी बनेको छ। यसले ३३ खेलमा ११ खेल जितेको छ। त्यस्तै ६ खेल बराबरीमा खेलेको छ।
कोस्टारिका र सर्बियाबीचको खेल बेलुकी ५ः४५
जर्मनी र सेक्सिकोबीचको खेल राति ८ः४५
ब्राजिल र स्विटजरल्याण्डबीचको खेल राति ११ः४५ मा
PREVIOUS POST Previous post: विराटनगर र जनकपुरबाट दुईतर्फी एयर रुट दिने सहमति
NEXT POST Next post: अरुण तेस्रोको सुरुङ खन्ने क्रममा शुक्रबारदेखि वेपत्ता ४ जनाको जिवितै उद्धार
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, असार ३, २०७५ ११:२१